Vokatra momba ny vokatra - Mpanamboatra vokatra any Sina, orinasa
Ny fehikibo fanaraha-maso ny fiampangana dia socket maranitra miaraka amin'ny fandaharam-potoana azo ampiasaina, maneho sy fanaraha-maso mifamadika. Izy io dia afaka mameno ny refy refy elektrika toy ny volavolan-jotra, ankehitriny, ny hery mahery vaika, matetika, sns, fandrefesana angovo, fampisehoana data, fifehezana vokatra, sns sns Ny maodely fampiasa dia azo ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny fanarahan-dalàna sy ny fanjifana herinaratra azo antoka. orinasa sy andrim-panjakana.
Ny fantsom-pahalalana mavesatra dia mampiasa fifehezana fantsona marani-tsaina ho toy ny latabatra fototra .Embed MCU amin'ny boaty fampitaovana optoelectronic, module module ary control circuit amin'ny boaty counter. novolavolaina sy novokarin'ny orinasa, araka ny fanitsiana ara-teknika amin'ny GB / T778.1, CJ / T188, CJ / T224.
3phase 4wire angovo metatra (lavitra) dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay arakaraka ny fanitsiana ara-teknika ny GB / T17215.321-2008 ary ny GB / T17215.323-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.
3phase 4wire prepaid energy metres (karatra IC) dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay araka ny fepetra ara-teknikan'ny GB / T17215.321-2008 ary ny GB / T17215.323-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.
Ny terminal fanaraha-maso ny fahombiazan'ny angovo herinaratra dia ampiasaina amin'ny fanjifana angovo mandritra ny andiany telo, ary afaka ampiasana serivisy serasera RS485 sy fiasan'ny fifandraisana an-tariby, izay mety ho an'ny mpampiasa hanatanteraka herinaratra, fanangonana sy fitantanana fanaraha-maso lavitra. Ny vokatra dia manana tombony amin'ny fametrahana precision, kely habe ary mora apetraka. Azo apetraka mora sy aparitaka ao anaty boaty fizarana izany hahafantarana ny fandrefesana angovo entin'izany, statistika ary fandalinana ny faritra samihafa sy entana isan-karazany.
Ny terminal fanaraha-maso ny fahombiazan'ny angovo herinaratra (4 fantsona) dia vokatra vaovao famokarana angovo sy novokarin'ny orinasa anay. Ity vokatra ity dia mampiasa siram-paritra lehibe sy fizotran'ny famokarana SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.
Dingana intelo LCD nampiditra sary an-tsary nomerika elektronika marika elektronika maro miaraka amin'ny rs485
Fitaovana maro andiany manana endrika telo miendrika, karazana fitaovana elektrika manan-talenta misy fandrefesana, fampisehoana, serasera fifandraisana RS485 ary famokarana herinaratra herinaratra, afaka mandrefy volavolan-tena, ankehitriny, herinaratra mavitrika, herinaratra, hery fahita, matetika, fandrefesana angovo. , fampisehoana data, fanangonana sy fifindrana, azo ampiasaina matetika amin'ny famandrihana varotra, fizarana automatique, trano manan-talenta ary fandrefesana angovo, fitantanana ary fanombanana eo amin'ny orinasa. Ny fahamarinan'ny fandrefesana dia haavo 1, ny fanatanterahana ny LCD na LED amin'ny tranokala ary ny serasera serasera nomerika RS485 lavitra. Izy io dia mifanentana amin'ny protokol fifandraisana DL / T645-2007 ary ny protocol fifandraisana fifandraisana MODBUS-RTU.
3PHASE 4WIRE ENERGY METER (karatra IC)
3 phase 4 tariby prepaid angovo metatra (karatra IC) dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay araka ny fanondroana ara-teknika amin'ny GB / T17215.321-2008 ary ny GB / T17215.323-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.